သူမမှားဘူး ကိုယ် ဝဋ်တွေလည်နေခဲ့တာ …. - ONE DAILY MEDIA
သူမမှားဘူး ကိုယ် ဝဋ်တွေလည်နေခဲ့တာ ….
ဝဋ်တွေလည်တဲ့အခါ … ဘယ်သူ့ကို ဘာတွေလုပ်ခဲတာလို့ဘယ်သူမှပြန်ပြောစရာမှမလိုပဲ ကိုယ့်အာရုံမှာ ပြန်ပြီး ပေါ်လာတတ်ပါတယ် … ဘယ်တုန်းက ဘယ်လိုစကားမျိုးကို ပြောခဲ့မိတာဆိုတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေ နားတွေမှာ ပြန်ကြားယောင်တယ် …
တစ်ချိန်က ကိုယ့်ကို အသေအခဲချစ်ခဲ့ဖူူးတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးတယ် ပြီးတော့ သိပ်ကို ဂရုစိုက်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာကို ဝန်ခံပါတယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဘယ်လိုမှ ရင်ခုန်လို့မရခဲ့သလို ချစ်လို့လဲမရခဲ့ဘူး တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်စကားတွေကြောင့် သူနာကျင်ခဲ့ဖူးသလို သူခေါ်တဲ့ဖုန်းတွေကို အနှောင့်အယှက်ပါဆိုပြီးချခဲ့ဖူးတယ် ….
သူပေးတဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေ အလေးထားမှုတွေကို ကျွန်မ လျစ်လျူရှုခဲ့ဖူးတယ်လေ ..မထင်ရင်မထင်သလို ဂရုမစိုက်သယောင်တွေ ပြခဲ့ဖူးတယ် … ဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်တော့ ရင်မခုန်လို့ပေါ့ … ကျွန်မ မှန်တယ်လို့ အမြဲထင်နေခဲ့တာပါပဲ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ တကယ်လဲမမှားခဲ့ပါဘူး
ဒါပေမယ့် တစ်ခု မေ့သွားခဲ့တယ် ဝဋ်ဆိုတာ လည်တတ်တယ်တဲ့ ခုတော့ ဝဋ်တွေ တကယ်လည်ပါပြီ ကိုယ်ချစ်မိတဲ့သူက ကိုယ့်ဂရုစိုက်မှုကိုယ့်အလေးထားမှုတွေကို တန်ဖိုးမထားတဲ့အခါ ကိုယ်တန်ဖိုးမထားခဲ့မိတဲ့ အချိန်တွေကို ပြန်သတိရမိတယ် သူရော ကိုယ့်လိုနာကျင်ရမှာပဲ ဆိုပြီး စာနာလာမိတယ်
နင့်ကို မချစ်မှန်းသိနေပြီပဲ ဘာလို့တွယ်ကပ်နေတာလဲလို့ မေးခွန်းလေးကို တချိန်က ကျွန်မ မေးခဲ့ဖူးသလိုပါပဲ အခုချိန်မှာ သူမချစ်မှန်းသိနေပြီပဲ ဘာကြောင့်တွယ်ကပ်နေတာလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးနေမိပြီ ဆပ်ရမယ့် ဝဋ်ကြွေးတွေမကုန်သေးလို့ ထင်ပါတယ် မစွန့်လွှတ်နိုင်ခဲ့သေးဘူး
သူမမွားဘူး ကိုယ္ ၀ဋ္ေတြလည္ေနခဲ့တာ ….
၀ဋ္ေတြလည္တဲ့အခါ … ဘယ္သူ့ကို ဘာေတြလုပ္ခဲတာလုိ ့ဘယ္သူမွျပန္ေျပာစရာမွမလုိပဲ ကိုယ့္အာရံုမွာ ျပန္ျပီး ေပၚလာတတ္ပါတယ္ … ဘယ္တုန္းက ဘယ္လိုစကားမ်ိဳးကို ေျပာခဲ့မိတာဆိုတဲ့ အခိုက္အတန့္ေတြ နားေတြမွာ ျပန္ၾကားေယာင္တယ္ …
တစ္ခ်ိန္က ကိုယ့္ကို အေသအခဲခ်စ္ခဲ့ဖူူးတဲ့ လူတစ္ေယာက္ရွိခဲ့ဖူးတယ္ ျပီးေတာ့ သိပ္ကို ဂရုစိုက္ခဲ့ဖူးတယ္ဆုိတာကို ၀န္ခံပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ကို္ယ္ဘယ္လိုမွ ရင္ခုန္လုိ့မရခဲ့သလို ခ်စ္္လို့လဲမရခဲ့ဘူး တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ့္စကားေတြေၾကာင့္ သူနာက်င္ခဲ့ဖူးသလို သူေခၚတဲ့ဖုန္းေတြကို အေနွာင့္အယွက္ပါဆိုျပီးခ်ခဲ့ဖူးတယ္ ….
သူေပးတဲ့ ဂရုစိုက္မႈေတြ အေလးထားမႈေတြကို ကြ်န္မ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ဖူးတယ္ေလ ..မထင္ရင္မထင္သလို ဂရုမစိုက္သေယာင္ေတြ ျပခဲ့ဖူးတယ္ … ဘာေၾကာင့္လဲလုိ့ေမးရင္ေတာ့ ရင္မခုန္လုိ့ေပါ့ … ကြ်န္္မ မွန္တယ္လုိ့ အျမဲထင္ေနခဲ့တာပါပဲ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္မ တကယ္လဲမမွားခဲ့ပါဘူး
ဒါေပမယ့္ တစ္ခု ေမ့သြားခဲ့တယ္ ၀ဋ္ဆိုတာ လည္တတ္တယ္တဲ့ ခုေတာ့ ၀ဋ္ေတြ တကယ္လည္ပါျပီ ကိုယ္ခ်စ္မိတဲ့သူက ကိုယ့္ဂရုစိုက္မႈကိုယ့္အေလးထားမႈေတြကို တန္ဖိုးမထားတဲ့အခါ ကိုယ္တန္ဖိုးမထားခဲ့မိတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ျပန္သတိရမိတယ္ သူေရာ ကိုယ့္လိုနာက်င္ရမွာပဲ ဆိုျပီး စာနာလာမိတယ္
နင့္ကို မခ်စ္မွန္းသိေနျပီပဲ ဘာလို့တြယ္ကပ္ေနတာလဲလို့ ေမးခြန္းေလးကို တခ်ိန္က ကြ်န္္မ ေမးခဲ့ဖူးသလိုပါပဲ အခုခ်ိန္မွာ သူမခ်စ္မွန္းသိေနျပီပဲ ဘာေၾကာင့္တြယ္ကပ္ေနတာလဲလုိ ့ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ေမးေနမိျပီ ဆပ္ရမယ့္ ၀ဋ္ေၾကြးေတြမကုန္ေသးလုိ့ ထင္ပါတယ္ မစြန့္လႊတ္နုိင္ခဲ့ေသးဘူး
အချစ်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတဲ့သူကိုမှ ကိုယ့်အချစ်တွေ အကုန်ပေးခဲ့မိတာ